Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny faharanitan-tsaina sy ny fiantraikany amin'ny PPC, ny zanatany ary ny dokam-barotra aseho | Martech Zone
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny faharanitan-tsaina sy ny fiantraikany amin'ny PPC, ny zanatany ary ny doka
Alahady 1 aprily 2018 Alahady 1 aprily 2018 Chad Pollitt
Tamin'ity taona ity aho dia niasa tamina asa ambony roa. Ny iray dia ampahany tamin'ny fivoarako matihanina mba hianarana izay rehetra azoko atao momba ny faharanitan-tsaina (AI) sy ny marketing, ary ny iray kosa nifantoka tamin'ny fikarohana teknolojia fanabeazana momba ny doka isan-taona, mitovy amin'izay naseho teto tamin'ny taona lasa - ny Landscape Technology Teknolo-ponenana Native 2017.
Tsy dia fantatro tamin'izany fotoana izany fa boky iray manontolo kosa no nivoaka tamin'ny fikarohana AI taty aoriana, "Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Marketing Analytics sy ny fahiratan-tsaina artifisialy. " Ara-bakiteny dia ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny marketing sy AI anio ary ny fiatraikany amin'ny analytics, haino aman-jery nahazo, tompona ary karama. Vokatr'izany dia tiako ny mizara izay nianarako tamin'ny fanaovana an'ity fikarohana vao haingana ity tamin'ny andiany roa.
Ny tapany voalohany dia hifantoka amin'ny fiantraikan'ny AI amin'ny haino aman-jery be karama mba hampidirina ny PPC, ny fampisehoana ary ny doka. Hiditra amin'ny lahatsoratra faharoa izay mifantoka manokana amin'ny tontolon'ny teknolojia dokam-barotra momba an'ity taona ity. Io dia nitombo 48% tamin'ny taon-dasa.
Alohan'ny hanombohantsika ny fiantraikan'ny AI amin'ny haino aman-jery karama dia tsy maintsy jerentsika aloha ny vokany amin'ny analytics. Io, angamba, ambonin'ny zavatra hafa rehetra dia misy fiatraikany mivantana amin'ny haino aman-jery karama.
Fitsikilovana artifisialy sy Analytics
Ny ankamaroantsika dia zatra mampiasa ny iray amin'ireo sehatra fanadihadiana telo na lehibe. Tsy hanana anarana intsony izy ireo. Ireo sehatra ireo dia manana ny sasany amin'ireo tsena fanaovana dokambarotra an-tserasera lehibe indrindra manerantany ihany koa. Tsy dia misy fanentanana hanampiana antsika handany kely sy hahatratra bebe kokoa.
Vokatr'izany dia mifantoka amin'ny angon-drakitra hatramin'ny ambaratonga iray lavitra ny tranokalanay izy ireo. Toy izao ny fijery azy:
Ny ankamaroantsika dia zatra nijery ny fanadihadianay tamin'ity maodely nomena ity. Na izany aza, ity maodely ity dia maneho fotsiny hatramin'ny 20% amin'ireo angona azo alaina ao anatin'ny sehatry ny fitaomana an-tserasera. Raha te hijery ilay 80% hafa isika dia mila mifantoka amin'ny data telo degre lavitra ny tranonkalantsika ilay maodely. Toy izao ny fijery azy:
Amin'ny fampiasana AI hisintonana ireo renirano angon-drakitra tsy voarindra sy tsy voarafitra marobe, ny analytics dia afaka mahita efa ho 100% amin'ny sehatry ny fitaomana lohateny an-tserasera, manokatra ny 80% izay tsy hitantsika mampiasa ny iray amin'ireo sehatra fanadihadiana telo lehibe. Mitovy amin'ny fijerena Internet toy izao:
Mifanohitra amin'izany fomba fijery omen'ny telo lehibe antsika izany:
Ny fananana an'io fomba fijery io dia misy fiatraikany lehibe amin'ny haino aman-jery mahazo, manana sy karama ary mizaha ireo sokajy tsirairay ao amin'ny ebook vaovao aho. Na izany aza, ho an'ity lahatsoratra ity dia andao jerena izao ny vokany amin'ny haino aman-jery karama manokana.
Fampahalalana momba ny artifisialy sy doka
Ny andian-teny hoe "programmatic" sy "bidding real-time" (RTB) dia be resaka nandritra ny taona maro tao anatin'ny fampirantiana sy ireo fampahalalam-baovao karama amin'ny ankapobeny. Indraindray, ireo andianteny ireo dia resahina miaraka amin'ny AI, fianarana milina ary fanodinana fiteny voajanahary. Na dia samy manana ny endrik'i AI aza ny rafi-pandaminana sy ny rafitra RTB, dia tena misolo tena ny teknolojia tetezana izay mampihetsi-po ny dokam-barotra amin'ny fangaraharana mangarahara, ho amin'ny ho avy tanteraka sy mangarahara.
Teknolojia roa no hisy akony lehibe indrindra amin'ity tetezamita ity - AI sy blockchain. Ny habaka fampisehoana dia mitolona amin'ny mangarahara sy ny fanondroana. Betsaka ny antoko fahatelo any izay mametraka ny tanany ao anaty vilia vatomamy ary mahazo denaria amin'ny fotoana laninay amin'ny teti-bola sarobidy. Manampia an'izay fihinam-bota amin'ny spam manao fisolokiana tsindry ary manana rafitra feno olana ianao.
Amin'ny antsalany, ny dokam-barotra aseho taha 0.05% click-through. Amin'ireo tsindry bokotra ireo dia 30 ka hatramin'ny 40% amin'izy ireo ihany no tsy mihetsika avy hatrany. Mahagaga ny tsy fahombiazan'ity fantsona ity. Ny doka fampisehoana voalohany dia avy amin'ny AT&T tamin'ny taona 1994 ary nanisy tahan'ny click-through 44%. Tamin'ny 1998 dia nihena be ny tahan'ny click-through - akaiky kokoa ny zavatra hitantsika ankehitriny.
Ny vaovao tsara dia ny teknolojia manampy amin'ny famahana ireo olana ireo amin'ny tsy fahaiza-miasa. Ao anatin'ny tontolon'ny analytics tarihin'ny AI izay mirehareha manana mari-pahaizana telo tsy lavitra ny tranokala, ny marika dia tsy vitan'ny hoe hahita ireo fantsona fampisehoana mahomby indrindra mitarika fifamoivoizana amin'izy ireo, fa ny fantsona rehetra kosa mamily fifamoivoizana amin'ny tranokala malina rehetra. ao amin'ny orinasan'izy ireo sy ny manodidina.
Amin'ny alàlan'ny famakafakana tarihin'ny AI, ny marika dia hahafantatra tsara ny toerana tokony hampiakarana roa sy ny toerana ilany hisintomana teti-bola. Ity haavon'ny fahitana ity dia manampy avo roa heny, ary na dia ny tsindry tsindry telo heny sy ny zava-bita aorian'ny tsindry aorian'ny fanaovana doka.
Fitsikilovana artifisialy ary mandoa isan-tsindry
Ny vahaolana famakafakana tarihin'ny AI dia afaka mipoitra ireo fehezan-teny manan-kery lehibe indrindra ho an'ny marika iray izay mampiasa loharanom-pahalalana maro tsy voarindra. PPC dia tsy natao ho an'ny dokam-barotra fotsiny ao amin'ny Google. Izy io dia mamaritra ny banga ary manondro teny lakile vaovao, fanitsiana tolo-bidy ary vondrona doka. Manampy ny mpivarotra hitantana tsara ny teti-bolany izany.
Ny mety mitambatra andian-teny lakile, vondrona doka, lasibatra sns sns dia saika tsy manam-petra amin'ny marika iray. Ny famelana ity angona angona ity hamakafaka amin'ny alalàn'ny fanadihadihana tarihin'ny AI no fomba mahomby indrindra hiantohana ny marika iray hampiasa vola amin'ny fangaro sy permutations mety indrindra.
Ny fampiasana milina fianarana ny fanatsarana dia mihatsara kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Tsy mitsaha-mihatsara io mitondra fiara io na izay tanjona napetraka ho an'ny PPC. Miaraka amin'ny toetrany tena izy, ny fanadihadiana an-tariby an'ny AI izay ampiasaina amin'ny fitantanana kaonty, dia manakiana indrindra ireo marika mora tohina amin'ny fiovan'ny vanim-potoana, tsena na mpanjifa haingana.
Na dia nanao lalan-dàlana farany aza ny AI tao amin'ny PPC, dia mbola tsy eo amin'ny ambaratonga ahafahan'ny fitantanana kaonty mandeha ho azy tanteraka izy io raha tsy misy mpivarotra ao ambadiky ny kodia. Na izany aza, ny tohiny amin'ny ho avy namboarina teo ambonin'ny tambajotran-tsivana misy fahaiza-mianatra lalina dia ho tonga any. Tahaka ny AI dia azo ampianarina hilalao lalao tsaratsara kokoa noho ny an'ny olombelona, ​​dia toy izany koa no ahafahany manao fampielezan-kevitra PPC irery indray andro any.
Fitsikilovana artifisialy sy doka
AI dia misy fiatraikany lehibe amin'ny dokam-barotra zanatany sahady. Amin'ny lafiny teknolojia doka, ny fampiasana ny fianarana milina dia miteraka modely isan-tsokajiny (CPE), mifanohitra amin'ny CPC nentim-paharazana, CPM na CPA. Mety indrindra ho an'ireo mpivarotra maniry hizara ny atiny farany ambony fantsona amin'ny ambaratonga. Ireo mpivarotra atiny dia maniry ny hampifandraisana azy ireo ny atiny.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny analytics, ireo tombo-tsoa rehetra omen'i AI ho an'ny dokambarotra fampisehoana dia tonga saina ihany koa - ny fahafantarana ireo tranonkala iza no mahomby indrindra amin'ny famoahana fifamoivoizana azo tanterahina hatramin'ny telo degre lavitra. Ity data ity dia mamela ny teti-bola hifindra any amin'ireo tranokala izay mahavita ihany ary mamela ny marika hamerina ny tetibola hiverina amin'ireo tranokala tsy manao izany. Ity haavon'ny fahitana ity dia manampy ny mpivarotra hisoroka ny ankamaroan'ny fako, hosoka ary fanararaotana mifandraika amin'ny media an-tserasera.
Izy io koa dia manome fomba fijery mifaninana tena marina. Ilaina io noho ny antony hafa tsy dia miharihary. Ny fanangonana lisitr'ireo fananana noforonin'ny mpifaninana amin'ny dokam-barotra zanatany ho an'ireo singa izay mahavita tsara dia afaka manampy amin'ny fanomezana marika amin'ny lafiny famoronana. Ho fanampin'izay, ny fahalalinan-tsaina momba ny atiny natsangana tao amin'ny analytics izay tarihan'ny AI dia ahafahan'ny mpivarotra mahalala izay atiny mety hahavita ny tsara indrindra amin'ny fampiasana vahaolana momba ny doka ho an'ny fizarana mizana.
Faharanitan-tsaina artifisialy sy atiny misy tohana
Ny fitaovam-pitsikilovana atiny mifototra amin'ny AI dia mety tsara ihany koa amin'ny famoahana sindikasa misy karama sy votoaty tohana. Raha ny filazan'i Margaret Boland an'ny Business Insider, ao anatin'ny dimy taona ho avy ny atiny tohana dia ny endrika tompon-tany hainganana haingana indrindra. Ny atiny tohana dia heverina ho doka maharitra. Lahatsoratra iray manontolo na andian-dahatsoratra nosoratan'ny fanontana na ny marika ihany.
Ny faharanitan-tsaina amin'ny atiny dia afaka manampy ny mpivarotra hanao ny lisitry ny famoahana sy / na bilaogy lasibatra mety hangataka atiny tohana na syndication misy karama. Izy io koa dia manome fomba tsara hanarahana ny fahombiazany rehefa mandeha ny fotoana nefa tsy mila miantehitra amin'ny famoahana hanolotra angona.
Fitsikilovana artifisialy sy haino aman-jery sosialy karama
Rehefa nandeha ny fotoana dia nihena be ny fahitana ny haino aman-jery sosialy ho an'ny marika. Izany dia nanery ny maro hampiasa vola amin'ny vahaolana tambin-karama betsaka amin'ny fantsona sosialy. Raha ny tena izy, 60% amin'ny fandaniana doka fandaharana manerantany amin'ny dokam-barotra zanatany dia ao amin'ny Facebook amin'ny taona 2020.
Ireo mpivarotra haino aman-jery sosialy karama dia mahatsapa tombony mitovy amin'ny voalaza ao amin'ilay fizarana dokambarotra teratany fandaharana etsy ambony. Na izany aza, tombontsoa lehibe iray omeny amin'ny marketing ara-tsosialy ara-tsosialy dia ny fahaleovan-tena. Ireo mpivarotra dia tsy mila miantehitra amin'ny dashboard Twitter na Facebook fotsiny mba hanaraha-maso ny zava-bitan'izy ireo. Tombony ihany koa ny fanamafisana ny angona sy ny benchmarking amin'ny fantsona media sosialy rehetra.
Ary koa, amin'ny fomba fijery telo degre, ireo mpivarotra dia ho afaka hamantatra hoe taiza ny mpampiasa talohan'ny nitsidihany ny tambajotra sosialy. Ity fampahalalana ity dia mety hanaporofo fa sarobidy tokoa amin'ny famaritana toerana vaovao hanaovana dokam-barotra na hametrahana hevitra momba izany.
Tsotra ny fehiny momba ny fiantraikan'ny AI amin'ny haino aman-jery karama - fampisehoana tsara kokoa ary kely ny vidiny. Fantatra bebe kokoa ny fako, ny hosoka ary ny fanararaotana, ary manana fomba fijery tsara kokoa momba ny zoron'ny indostrian'ny Internet izahay. Manantona anay indray amin'ny herinandro ho avy izao rehefa misitrika lalina ny tontolon'ny teknolojia dokambarotra teratany. Raha mila fanazavana misimisy kokoa momba ny fiantraikan'ny AI tamin'ny haino aman-jery sy ny fananany ary ny sokajy sokajy misy azy ireo dia aza misalasala misintona ny bokiko farany.
Marketing Analytics & faharanitan-tsaina artifisialy
Tags: aifahaizana artifisialyFitsikilovana artifisialy sy AnalyticsFitsikilovana artifisialy sy dokaFitsikilovana artifisialy sy haino aman-jery sosialy karamaFitsikilovana artifisialy ary mandoa isan-tsindryFaharanitan-tsaina artifisialy sy atiny misy tohanateratany dokam-barotrahaino aman-jery sosialy karamamandoa isaky ny kitihofividianana doka fandaharanavotoaty voohana
Chad Pollitt, veterana voaravaka amin'ny Operation Iraqi Freedom ary Komandin'ny tafika amerikana teo aloha, no mpiara-manorina ny Relevance, tranonkala voalohany sy tokana manerantany natokana ho fampiroboroboana ny votoaty, vaovao ary hevi-baovao.
Izy koa dia Profesora Adjunct an'ny Marketing amin'ny Internet ao amin'ny Indiana University Kelley School of Business ary mpampianatra Adjunct an'ny Marketing Marketing ao amin'ny Rutgers University Business School.
Chad dia mpikambana ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina an'ny rafitra fitantanana ny fako misy alàlan'ny blockchain, Swachhcoin, ary sehatra fanaovana dokambarotra teratany, inPowered and AdHive.
Widget WordPress Sidebar sy ny kaody fohy momba ny filalaovana Podcast
Wayin Nandefa Tselatra Hafa Tantara Sosialy